भर्खरै पत्ता लाग्यो कोरोना भाइरसको नयाँ लक्षण ! यस्तो छ नयाँ लक्षण , सबैले जानिराखौ ! – AB Sansar
September 23, 2020 adminLeaveaComment on भर्खरै पत्ता लाग्यो कोरोना भाइरसको नयाँ लक्षण ! यस्तो छ नयाँ लक्षण , सबैले जानिराखौ !
पाचन प्रणालीलाई असर गर्ने गरी कोरोना भाइरस संक्रमणले बिरामीको गन्धको शक्ति र मुखको स्वाद बिगार्दैछ ।यद्यपि, त्यस्ता समस्या १५ प्रतिशत बिरामीहरुमा भइरहेको छ । कोरोना भाइरसले सबैभन्दा सास फेर्ने क्षमतालाई असर गर्छ।कोरोना बिरामी बढ्दै छ, यसको अन्य प्रभावहरु पनि छन्। भारतमा राज्य दून मेडिकल कलेज अस्पतालको श्वासन रोग विभागका प्रमुख तथा कोरोनाका नोडल अफिसर डा. अनुराग अग्रवालले भने कि धेरैजसो बिरामीको सामान्य लक्षण हुँदैन। *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
जाडो महिनामा एक्लै रात काट्न गाह्रो छ! कोई हुनुहूँछ.
विवाह गरेको एक महिना नबित्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संकट…